Raikitra ny fampielezan-kevitra: matoky ny mpifidy ireo kandidà loholona IRD | NewsMada
Raikitra ny fampielezan-kevitra: matoky ny mpifidy ireo kandidà loholona IRD
Par Taratra sur 20/11/2020
Nanomboka, omaly 19 novambra, ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana ho loholona eto Madagasikara, hatao ny 11 desambra ho avy izao. Kandidà roa, narotsaky ny lisitra IRD, Razafimahefa Heriniaina sy Rabetsaroana Sylvain.
Nitarika ny fisantarana izany ho an’ny kandidà milatsaka amin’ny anaran’ny IRD, manohana ny filoha Rajoelina Andry ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Chrisitine. Mazava ny kabariny, maro ny fifidianana efa nosedraina hatramin’izay. Nohamafisiny fa “tokana ny kandidà IRD manohana ny filoha Rajoelina. Tsy misy kandida hafa na lisitra hafa afaka milaza ho IRD fa ireo ihany no nahazo ny tsodrano avy any amin’ny filoha.
Notsipihin- dRazanamahasoa Chrisitine, fa aoka ny rehetra sy ny tsirairay, tompon’andraikitra ao amin’ny antoko na ny mpiray vovonana mba tsy hitavozavoza, satria adidy lehibe no miandry. Tsy ho azo ny fandresena raha tsy misy ny fahamailoana sy ny fahakingana. Faniriantsika ny hanaovana poa-droa ka samy ho lany daholo ireo kandidà roa natolotry ny IRD.
Anisan’ny tanjona sy vina kendren’ny kandidà IRD ny fikarohana mpiara-miombon’antoka avy any ivelany. Antony hanamafisana ny fampandrosoana, indrindra ny eny anivon’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, anisan’ny andraikitry ny loholona.
Nilaza ny kandidà Razafimahefa Heriniaina fa tsy hanaiky hatao tsindry izy ireo rehefa soa ho lany eo. Hidina ifotony izy ireo ary hifantoka amin’ny asa tena fampandrosoana eny ifotony. Hatao laharam-pahamehana ny hanohanana ny kaominina amin’ny lafiny teknika sy ara-bola.
Hitohy any amin’ny distrikan’i Miarinarivo ny fidinana ifotony, anio.